Göteborg: Iskuul ku yaal oo kooxo aan la aqoon waxyeello u geeysteen | Somaliska
Dugsiga hoose dhexe ee Lövgärdesskolan ayaa kooxo aan la aqoon waxaa ay habeenimadii xalay ahaa u geeysteen dhaawac xoogan ka dib markii ay je jebis iyo qarbudaaad ugu dhaqaaqeen agabkii iskuulku lahaa. Jan-Olof Croon, oo isagu u qaabilsan dhinaca adeegga iskuulka ee vaktmästare-ha loo yaqaan ayaa sheegay in iskuulku u eg yahay goob dagaal.
Kooxdan waxyeeladda u geeysatay iskuulka, ayaa la runsan yahay iney ka soo galeen qeybta jimnaastik-kada ka dibna u sii gudbay qeybaha kale islamarkaana je jeibis ugu dhaqaaqay dhamaan agabyadii waxbarashadda loogu talagalay ee yaalay fasaladda farshaxanka, muusiga, maaqayada iskuulka iyo fasaladda ardeyda.
Booliska oo goobta gaaray ayaa sheegay in qiimaha dhibaatada iskuulka loo geeystay ay kor u dhaaftay boqol kun oo karoon.
Booliska waxaa kale oo ay sheegen ineey u egtahay mid lugu wax yeeleynayey iskuulka. Mana jirto cid loo soo qabtay haatan. Iskuulka ayaa maanta waxaa uu ahaa mid alaabada loo xiray oo ardeyda guryahoodii loo kala diray. Marika Andersson, oo ah maamulaha iskuulka ayaa mar ay saxaafadda la hadleeysay sheegtay in maamulka iyo macalimiinta shir ay ka leeyihiin falka, islamarkaasina ay la hadli doonaan ardeyda oo ay tiri waxaa laga yaaba ineey maqluun warar falkan ku saabsan. Iskuulkan ayaa sadex bilood ka hor dableey hubeeysani waxeey iskuulka hortisa ku rasaaseeyeen macalin wax ka dhigi jiray, arrintani ayaa ku reebtay cabsi iyo wel wel soo wajahada ardeyda iyo maamulka.
Dowlada oo soo bandhigtay sharciyo cusub oo la xiriira qaadashada Laysanka
Iska ilaasha daan-daansiga caado-qaatayaasha maqaarka madoow